U-Apple uthumela isimemo se-WWDC 2017 ephambili | Ndisuka mac
Phakathi ku-Februwari, kunye neenyanga ezininzi kwangaphambili, into esingayiqhelanga, u-Apple wazisa ngokusesikweni imihla yeNkomfa yeHlabathi yabaPhuhlisi, inkomfa eza kuqala ngoJuni 5 iphele nge-9 kaJuni eSan Jose, California. . Njengesiqhelo kusuku lokuqala, iApple iya kuvula iinkomfa kunye Ukunikezelwa kweenkqubo ezintsha zokusebenza eziza kuvela ezandleni zazo zonke izixhobo ezithengiswa ngu-Apple okwangoku kwintengiso, ezinje ngeMac, Apple TV, watchOS kunye ne-iPhone / iPad kunye ne-iPod touch.
Kwiinyanga ezininzi emva kokubhengezwa ngokusesikweni, iApple iqalile ukuthumela izimemo kumaphephandaba eziza kuzimasa lo msitho apho kukho amarhe amaninzi, ayizukuba liqonga lokwazisa kuphela iinkqubo ezintsha zokusebenza, I-Apple ingabonisa ukuhlaziywa kwe-iMac, ukongeza ekunikezeleni ngesixhobo esifana neAmazon Echo, eya kuthi isivumele ukuba sinxibelelane nedatha yethu efana nekhalenda, abafowunelwa, ukukhangela kwi-intanethi ukongeza ekudlaleni umxholo okhoyo kwiApple Music.
Kwiminyaka yakutshanje, uApple wenze intetho kwiZiko leMoscone eSan Francisco, kodwa ngeli xesha abafana baseCupertino bagqibe kwelokuba bakhethe iZiko leNgqungquthela laseSan José, elinamandla afanayo nalawo eMosconone Centre. Inkcazo yokuvula Iya kuqala ngo-10: 00 ekuseni ngexesha lendawo, ngo-19: 00 ebusuku eSpain, ngo-12: 00 eMexico, eColombia, e-Ecuador nasePeru, ngo-13: 00 ebusuku e-Chiile nango-14: 00 e-Argentina.
Njengesiqhelo lonke iqela leSoy de Mac liya kuba sezantsi komgqomo ukuya Yazisa ngazo zonke iindaba eziza kubakho kule nkomfa. Emva kokugqitywa kwayo, iApple iya kuqala ukwazisa ii-betas zokuqala, kuphela kubaphuhlisi beenguqulelo ezilandelayo zeenkqubo zayo zokusebenza. Abasebenzisi abayinxalenye yenkqubo ye-beta yoluntu kuya kufuneka balinde iiveki ezimbalwa de iApple ithathele ingqalelo ukuba inguqulelo ye-iOS kunye neMacOS izinzile ngokwaneleyo ukuyikhuphela eluntwini ngendlela elawulwayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple ithumela izimemo kwi-WWDC 2017 ephambili